Encane eluhlaza okwesibhakabhaka - I-Airbnb
Encane eluhlaza okwesibhakabhaka
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Thorsten
U-Thorsten Ungumbungazi ovelele
Igumbi lezivakashi lisesitezi sesi-2 sebhilidi elihlala endaweni eyimfashini yesifunda samasiko sase-Dresden-Neustadt, indawo yasemadolobheni emaphakathi ne-Dresden enezakhiwo zesitayela sika-Wilhelminian ezivaleke kancane kusukela ekhulwini leminyaka eledlule.
Ukusuka lapha ungakwazi ukufinyelela kalula izindawo zedolobha elidala laseDresden ngezinyawo noma ngethilamu. Kuningi futhi ongakuthola esifundeni saseDresden Neustadt.
Sinikeza amakamelo ethu ezivakashi njengamakamelo aphindwe kabili kubantu abangu-1-2 ngenani eliphansi. Sinikeza umbhede owodwa noma emibili ehlukene yokulala. Uma kunesidingo, lezi zingadudulwa ndawonye zenze umbhede ophindwe kabili.
Izintengo ezikhethekile zesib. ukusetshenziswa kwamasonto onke kungenzeka ngohlelo.
I-Dresden Neustadt iyisifunda esiphilayo kakhulu. Kukhona amathilomu, ama-bistros, amabha kanye nezindawo zokudlela endaweni eseduze.
Kunebhikawozi elihle elibhekene ngqo nendlu yethu, lapho ungathenga khona ukudla kwasekuseni uma kunesidingo.
Kukhona ukuxhumana okuhle kakhulu kwezokuthutha zomphakathi endaweni:
Olayini bethilamu abahlukahlukene bayama e-Albertplatz (cishe uhambo lwamaminithi angu-7)
E-Neustädter Bahnhof (uhambo oluhamba cishe imizuzu eyi-10) kunoxhumano lwenethiwekhi ye-S-Bahn nezokuthutha zamabanga amade.
Ilineni lombhede namathawula afakiwe enanini lasebusuku. Ukusetshenziswa okwabiwe mahhala kwe-inthanethi nge-WLAN / WIFI nakho kufakiwe. Sinikeza igedlela, ukukhethwa kwetiye, ikhofi esheshayo ne-cappuccino ekamelweni mahhala.
Igumbi linendlu yokugezela yesivakashi, kuye ngokuthi uhlala kuphi, futhi ingasetshenziswa izivakashi ezingu-1-2 kwelinye igumbi lezivakashi.
Asinikezi ukudla okudlula ukunikezwa kwezinto ezingenhla.
Asifuni ukunikeza ukusetshenziswa okwabiwe kwendawo yethu yekhishi, njengoba ikhishi liyingxenye yegumbi lethu lokuphumula. Sicela ukuqonda kwakho.
Indlu yethu yindlu engabhenywa. Ukubhema kungenzeka engadini noma phambi kwendlu.
Indawo yokupaka iyatholakala emgwaqeni ophambi kwendlu yethu. Izindawo zokupaka ziyakhokhiswa, kodwa azibizi kakhulu ngentengo yama-Eur 3-4 ngamahora angama-24. Kukhona indawo yokupaka mahhala kweminye imigwaqo. Ukusuka lapho kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya endlini yethu.
4.71 out of 5 stars from 513 reviews
4.71 · 513 okushiwo abanye
UThorsten Ungumbungazi ovelele